IMyuziyam ngokwayo ayinayo indawo yayo yokupaka. Kukho, nangona kunjalo, iindlela ezininzi zokupaka.
NgaseOrange Street, ecaleni kwendlela ngqo phambi kweMyuziyam, kukho indawo yokupaka yasimahla iiyure ezimbini. Yiza kuqala, khonza!
Kukho indawo yokupaka imitha phambi kweMyuziyam ngaseOrange Street. Ezi mitha zamkela amakhadi okuthenga ngetyala kunye nekota, iidimes, kunye nenickels okanye ungasebenzisa iapp https://www.paybyphone.com/.
Indawo yokupaka i-Hannah Block USO ehlawulwayo ibekwe ngaphesheya kwesitalato ukusuka kwiMyuziyam.
Indawo yokupaka ehlawulelwayo yesiSecond Street izibloko ezi-1.5 ukusuka kwiMyuziyam.
Indawo yokupaka ikufutshane kwiMyuziyam ibekwe kwisitalato iMarket phakathi kwe2nd neFront St. Imizuzu yokuqala engama-90 isimahla. Itroli eblue yasimahla inokukuthatha kwaye ikubeke phambi kweMyuziyam.
Kukwakho indawo yokupaka yasimahla kwizitrato ezininzi kumbindi wedolophu. Ndwendwela iwebhusayithi yeSixeko saseWilmington ngolwazi oluthe kratya malunga nedolophu yokupaka iWilmington.
IMyuziyam yaBantwana iyafikeleleka kwiindawo ezininzi zokumisa iibhasi edolophini. Esona sikhululo sikufutshane sikwi-800 ft kuphela ukusuka kwisikhululo sebhasi ye-Wave Transit kunye ne-Port City Trolley ezantsi kwedolophu kwikona ye-Front St. kunye ne-Ann St. Ibhekisa emantla kwi-Front St. kwaye uthathe ekunene ungene kwi-Orange St. ukuya e-Orange St. iMyuziyam.
Cofa apha ukukhuphela ishedyuli yasimahla yeTrolley yedolophu.
ukufikelela kwisikhululo sebhasi
Indawo yokupaka efikelelekayo
Iindawo zokupaka ezikufutshane eziphawulweyo ezifikelelekayo kubaxhasi abanepleyiti yelayisensi yokupaka efikelelekayo okanye ithegi yokuxhoma zikwindawo yokupaka iHannah Block USO ehlawulweyo kwi-118 S. 2nd St. Iindawo zixabisa i-$1.00 ngeyure kwiiyure ezintlanu zokuqala kunye ne-$8.00 ye-24 iiyure. Abaxhasi abaneepleyiti zephepha-mvume lokupaka ezifikelelekayo okanye iithegi ezijingayo banokupaka simahla nakwesiphi na isithuba esinemitha esitratweni kangangexesha elingasikelwanga mda. Izitalato ezinemvume yokuhlala ezithintelweyo azibandakanywa.
Sinomnyango ofikelelekayo kwi-2nd St. Ecaleni kweMyuziyam kwi-2nd Street kukho iyure enye indawo yokupaka simahla ecaleni kwesitalato. Buzz the doorbell ngoncedo kwaye usitsalele umnxeba ukuba ufuna isitulo esinamavili okanye olunye uncedo.
Abasebenzi bethu kwiMyuziyam yaBantwana yaseWilmington bakholelwa kumandla omntwana ngamnye ofunda ngokudlala. Yiyo loo nto sizama ukubonelela zonke iimfuno zeendwendwe ngokubonelela ngezezimali, ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo, nangofikelelo lobukrelekrele kwindawo eyamkelekileyo nekhuselekileyo. Siqhubeka sifunda kwaye sisebenzisana noluntu lwasekuhlaleni olusixhasayo kulo msebenzi. Ngeendawo zokuhlala, imibuzo, okanye izimvo, nceda uqhagamshelane nathi ku- 910-254-3534 ext. 106! Funda ngakumbi malunga nokufikeleleka kwethu apha .
Cofa apha ukuze ufumane umkhomba-ndlela ngokulula ukusuka kwindawo yakho ukuya kwi-CMoW! Idilesi yethu yi-116 Orange St. Wilmington, NC 28401